निर्मला हत्याकाण्डमा प्रहरीद्वारा कुखुरा चोर पक्राउ !! - PuraKhabar
निर्मला हत्याकाण्डमा प्रहरीद्वारा कुखुरा चोर पक्राउ !!
December 7, 2018 December 7, 2018 Purakhabar News
बिहान हामी पुलिस कार्यालय गयौँ, भित्र जान दिएन । अब तिम्रो छोरालाई काठमाडौं लग्ने हो, तिमी पनि जानुपर्छ, २ बजे तयार हुनू भनेर मेरो श्रीमान्लाई पुलिसले भने । पुलिसले भनेपछि मान्नैप¥यो, पक्राउ परेका अरूलाई पनि गाडीमा राखेर धनगढी लगे, त्यहाँबाट जहाजमा काठमाडौं लगे भन्ने सुनेकी छु, अरू जानकारी पाएकी छैन ।
चार–पाँच दिनयता हरेकपटक पक्राउ गर्दा निर्मलाको केसबारे सोधपुछ गर्छन् भनेर छोराले भनेको थियो । तर, त्यो केसमा मेरो छोराको दोष छैन । किनकि १० साउनमा निर्मलाको घटना भएको भन्ने सुनेकी छु । ९ साउनमा मेरो छोरालाई पुलिसले पक्राउ गरेको थियो ।
हाम्रै गाउँको एउटा मान्छेले कुखुराको मासुको व्यापार गर्छ । उसको कुखुरा हराएको रहेछ । चोरीमा मेरो छोराको नाम लिएको रहेछ, त्यसैले पुलिसले उसलाई पक्रेको थियो । त्यो रात विशाल थुनामै बस्यो ।
भोलिपल्ट बिहानै म गएकी थिएँ, म जमानी बसेपछि विशाललाई पुलिसले छाडिदियो । हामी दिउँसो ११ बजेतिर घर आयौँ, खाना खायौँ, दिनभर कतै गएनौँ । मैले विशाललाई पनि कतै जान दिइनँ, किनकि जमानीमा बसेर ल्याएकी थिएँ ।
भोलिपल्ट साउन ११ मा फेरि पुलिसको वडा कार्यालयमा लिएर गएँ । तर, कुखुरा हरायो भन्ने मान्छे आएन । पुलिस सरहरूले फोन गर्दा पनि आएन । त्यसैले हामीलाई छाडियो । त्यसपछि प्रहरीले मेरो छोरालाई अहिलेसम्म सोधखोज नै गरेको थिएन ।
मेरो छोराले के–के औषधि पनि खान्छ भनेर हल्ला चलेको सुनेकी छु । दारु खाएको थाहा छ, त्यस्तो औषधि खाएको मलाई थाहा छैन । बरु एकपटक एउटा पसलबाट बिस्कुट, चाउचाउ चो¥यो भनेर पनि पुलिसले लगेको थियो । यसअघि पनि चोरीको केसमा पुलिसले लगेकोे हो, तर त्यस्तो अपराध गरेको भन्ने गलत हो ।@dainiknepal
सिके राउत पुर्पक्षका लागि जेल चलान, सहि कि गलत ?
आयल निगम र नेपाल बैंकको लिखित परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक (उत्तीर्णको नामावलीसहित)